Soo laabashada Ciise Masiix September ama October 2016 | LE PRÊCHEUR DU RETOUR DU ROI
Ka hor inta qabashada mawduuca soo laabashada Ciise Masiix, hadana waxa xusuus mudan qaar ka mid aasaasiga ah ee kiristaanka iyo gaar ahaan in ay ku noolaadaan rumaysad ee jeer dhamaadka.
NOQON Masiixiyiinta jeer dhamaadka
First noqon Christian ah waa in la fahmo in Ilaah yahay abuuraha wax walba oo sidaas daraaddeed annaguna uga mid nahay Abuur Ilaah.
Waxaa sidoo kale la fahamsan yahay in Ilaah na abuuray xor ah oo ka fadilnaa doonista xorta ah si aan nafteena go’aan sida aan u isticmaalno hadiyad cajiib ah in Ilaah ina siiyey « Life ».
Si fiican Ilaah iyo abuurista nin fahmo, waxaan idiin ku yeedhi akhriya Kitaabkayga « Wacdiyuhu King ee Return of mugdiga iftiin yimaado » arko maqaalka ku saabsan buugga: Book The – Return Wacdiyuhu wuxuu Boqorkii
Ilaah naxariistiisa koobi karayn ayaa na siiyey oo qaali ah « nolosha » oo dhan nasiib yar mahad at qiimaha runta ah. Life waxaa inoo siiyey by Ilaah oo aan dalbanayaan wax naga soo. Waa hadiyad. Laakiin hal maalin in nolosha ciday ku dhamaado.
Waayo, qaar ka mid ah, nasiib darro, tani waa ka da ‘yar oo nolosha in la joojiyo, waayo kuwa kale ay ka gaaraan blithely boqol sano ama in ka badan.
Ka dibna, ka dib markii la joogo dhimashada ee jidhka, nafta u muuqataa ka hor ay abuure.
Waa in aan fahamsanahay in markii uu abuuray Ilaah oo sidaas daraaddeed xilligan dhimashada nafta toos yimid waqti xukunka la soo dhaafay.
Inta lagu guda jiro maxkamad this saddex doorasho yihiin ka dibna la heli karo si ay dad naftiis.
Qaar ka mid ah kuwaas oo qas ah nolosha la xukumay doonaa inay ku qaataan daa’in in cadaabta.
Inta badan ayaa nolol mana saafi ah mana qalloocan « diirran » Hase ahaatee sidoo kale tegi qaataan daa’in in cadaabta.
Kuwa keentay nolol caafimaad leh ixtiraam iyo xaqnimo sidoo kale tegi doonaa inkastoo noloshooda dayan ku qaataan daa’in in cadaabta.
In Christian ah waa in ay fahmaan in nafaha oo dhan waxaa lagu xukumay at dhalashada ku qaataan daa’in in cadaabta. Waxaa xaqiiq ah!
Oo anna waxaan waxba kuu ogolaanayaa igu odhan haddii cadaabta noqon doonaa qaar ka mid ah xanuun badan kuwa kale oo ku salaysan falalka ka go’an inta lagu guda jiro noloshooda ka yar.
wax nijaas No boqortooyada jannada geli karto iyo Sida aan dhamaanteen u sidayaal dembiga asalka dhamaadka nolosheena dhimanaya on Earth, si aan u dhan xukumay qaataan nolosha weligeed ah ee cadaabta.
Maxaa Jahannamo mid ma hufan ogyahay, si kastaba ha ahaatee, in kitaabkii Enoch waxaan leenahay guudmar, annaga oo ogaaney in ay jiraan meelo oo jannada ku jira ama lagu xiraa leh weligiis curiyay isagoo Ilaah caasiyey. Ciise Masiix la hadlay jahannamada tiigsanaya Jahannamo (laakiin waxba sheegay in Kitaabka Quduuska ah waxa ay dhab ahaan Jahannamo) sidoo kale waxaan hypothesized in this waxaa laga yaabaa in cadaabta in aan article: waxgarasho ay ku FAHMIN ahu Jahannamo ,
Waa in laga cabsado in Jahannamo waa meel ay ka jirto nolosha weligeed ah ka baxsan ee jacaylka Ilaah. Laakiin weli waa ka hoos ku haynta iyo kormeerka malaa’igihiisa. (Eeg buugga of Enoch)https://victorpicarra.wordpress.com/le-livre-dhenoc/
In Christian ah waa in ay fahmaan in kaliya Love Ciise Masiix awood noo kartaa inay sii rajeeyaan in ay ka baxsadaan this aayahooda daa’in gebagaboobaan Dadka la qorsheeyey by Ilaah tan iyo caasinnimada ee Aadan iyo Xaawo.
Christian Si la ah waa in ay dambiile ah la aqoonsado oo ay aqbalaan in la badbaadiyey by jacaylka Ciise Masiix, qaddar this gebagaboobaan.
In Christian ah waa in ay aqbalaan oo ku nool sidii loo baray Ciise Masiix in jacaylka, nabad, jacayl, isudanqasho iyo is-hoosaysiinta.
In Christian ah ayaa lagu baabtiisay biyo, Ruuxa iyo mar kale dhalan.
By baabtiis biyo aan ka toobad dembiyadeenna iyo yimaadeen Ciise Masiix si ay u badbaadaan by aqbalin in uu jacayl iyo dhiig ku daatay oo wuxuu noo on iskutallaabta.
Iyada oo baabtiiska ruuxa aan Ilaah ka baryaynaa inuu hanuuniyo nolosheena. Ka dib markii la helo baabtiis biyo Christian ah waa in hab shakhsi inuu Ilaah u tukado weydiin Hanuuniye iyo naftiisa maareeyo.
Sidaas socon nolosha mar dambe by damacyada jidhka, laakiin kuwa Ruuxa. Tani waa baabtiiska Ruuxa.
Saasaana dhashaan mar kale in our nolosha dunida daba nolosheena in jacaylka, nabad, jacayl, isudanqasho iyo is-hoosaysiinta. Laakiin in xayi ah in ay raacaan waxbarista Ciise Masiix, Ilaah u adeega logu amarradiisa iyo caawinta kuwa dooni inoo yahay caawimaad. caawimo dig idin keeni waa in aan keeni mid ku qaata in ay ku adkaysato in dembiyadooda iyo xumaanta. Mana aad u horseedi in la diido cilmiga Ciise Masiix.
Marka aad caawimo ka dhigi aad u noqdaan mas’uul ka ah isticmaalka gargaar this.
Sayidka xaqiiqda ah lacag la siiyo si ay u addict daroogada ama cabbay a yaanay ma waxaad u malaynaysaa in aad dib u camal fiican. Haddii uu ku weydiiyo waxaad lacag ku bixin cuntada. Sidoo kale xaqiiqda ah ee lacagta la siiyo kuwa ay isticmaalaan carruurta inaan dawarsadona ma aha in aad u horseedi in ay aaminsan tahay in aad dib u camal fiican.Waxaad mas’uul ka noqon xad-gudubka si ay carruurta.
Ka dib markii aannu nolosha dhulka, Christian u muuqataa Ilaah hortiisa garsoorid. Oo by jacaylka Ciise Masiix, waxa uu si toos ah oo aan u socday Haadees.
Christian ayaa la xukumo, haddii shuqulladii naftiisa wanaagsanayn, uu si boqortooyada jannada tegi doonaa. Haddii shuqullada naftiisa aan wanaagsanayn ku filan, ma dhex mari doonaa ka hor inta purgatory galaya boqortooyada jannada. Laakiin, haddii shuqulladii naftiisa ahaayeen xun uu cadaabta tegi doonaa inkastoo uu noqday Christian a.
Waayo, laba kun oo sano tani waa sidaas.
Laakiin waxaan nahay dhamaadka waqtiga iyo wax xoogaa la beddelo.
Maxaa beddelo waa in dhamaadka waqtiga Ciise Masiix waa in Earth noqdaan oo ay halkaas boqor noqday ee kun oo sano in kala sooci doonaa aadanaha xukunka la soo dhaafay.
Oo Nasaarada wanaagsan aan la sugno soo laabashada Ciise Masiix in rajada ah in waxa uu noqon doonaa mid aad u dhakhsaha badan.
Boqortooyada Masiixa dhulka ku noqon doonaa valg waaridda, waxaan muddo dheer ku noolaan doonaa, laakiin weli waa idlaan doonaan dhimasho ka hor isagoo nolosha weligeed ah.
Xumaan laga masaafuriyo doonaa dhulka ka inta lagu guda jiro Millennium. Waxaan hoos boqortooyada Ilaah ee jacaylka iyo nabaddu wuu noolaan doonaa.
Laakiin, sababtoo ah waxaa jira laakiin a, oo waa weyn. Ma in soo laabashada Ciise Masiix waa in ay ahaadaan sida in xanuunkii foosha.
Sidaas badan soo laabashada Ciise Masiix dhow yahay iyo nolosha dambe ku adag tahay aadanaha.
Waxaan ka arki kartaa oo dhan sida sano ka gudubtaan, gaar ahaan tan iyo 29 September 2008, iyo jeer ugu adag ee dhammaan heerarka. Bal eeg article: SEDDEXDA CALAAMADAHA DAMBE EE laabashada Ciise Masiix dunida!
Earth , dhulgariir, buureedyada, duufaanada, roobab karar ah, duufaanada, dabka, isbedelka cimilada, Dhulguurka, buuq wayn oo aan la garaneyn oo ciidda duma abuuro meelaha dillaacsan weyn.
Cirka: meteorite dhaco, Mandheera qoraxda, ku dhawaaqay laabashada Nibiru, kululaaneysa oo ka mid ah meerayaasha nidaamka qoraxda, UFO.
Duur-joogta : Dhimatay sharrixin by malaayiin sanad walba ka xoolaha, xayawaanka duurjoogta ah iyo shimbiraha iyo kalluunka.
Humanity : baabba ‘, cudurro dillaaca, luma qiimaha, Baxniintii, Rabshadaha, Wars iyo dagaallo hadalhayntood.
Church The : Ridada waa la arki karo heerka ugu sareeya. Pope ayaa dafirtay cilmiga Ciise Masiix ku ah garashada Diimaha oo dhan sida Waddooyinkiisa in Ilaah. Sidaas darteed waxaan halmaamay erayadii aad Ciise Masiix, « Anigu waxaan ahay jidka runta iyo nolosha, ninna Aabbaha uma yimaado, xaggayguu ku yimaado maahee! «
Ereyadan Ciise Masiix waa xoog badan oo ha isu amaahiyaan muran.
dhawaaqyada wayn la aqoon loo fasiri karaa inuu turumbooyin apocalypse. Https://youtu.be/mTOQvDzihTU
dhacdooyinka intaas oo dhammu waxay ka dhacaan si outsized waana la sii sheegay in Kitaabka Quduuska ah in uu ku dhawaaqo jeer dhamaadka iyo soo laabashada Ciise Masiix.
Wax kasta waxaa loo sameeyaa by Ilaah ka toosi aadanaha, laakiin nasiib daro aad u yar oo u muuqdaan in ay ogaadaan jeer gaarka ah waxaan ku nool nahay.
Ragga badan oo ku saabsan waxa ay qaban doonto isbuuca soo socda ama sida ay u saari doonaa dhamaadka bisha, halkii ay ku tukanayeen inuu Ilaah u ah badbaadada naftiinna, iyo xataa mid ah dadka Masiixiyiinta qabaa.
Weli oo dhan dhibaatooyin iyo masiibooyin kaas oo aadanaha ka sii dari doonaa, oo xataa ilaa Rabbigeenna Ciise Masiix.
daqiiqado ka hor soo laabashada Xun na sugi oo ka mid ah King of Kings Ciise Masiix.
Waan ognahay in ay ka baxayn daqiiqado ka hor la soo dhaafay uu ka soo laabtay noqon doonaa ugu adkaa.
In ka badan abid, waa in aan ku tukado, oo maalin kasta mar kale iyo mar kale ku baryayaaye.
Waa in aan Ilaah ugu mahad naqayaa mar kasta oo uu caawimo iyo Ilaah ka baryaynaa in hanuuniyo oo na ilaaliyo daqiiqad kasta oo ka mid ah jiritaanka, gaar ahaan lahayn waqtiyadan adag iyo apocalyptiga.
In Christian ah waa in ay fahmaan in jacaylka Ciise Masiix waa gacantii by Ilaah ugu bixiyey inuu naga badbaadiyo cadaabta.
Waxa intaa dheer in naftayada badbaadinayo ka cadaabta by jacaylkiisa Ciise Masiix sidoo kale badbaadin doonaa qaar badan oo innaga mid ah ka hor in Earth uu ka soo laabtay jirka.
Kuwa la badbaadin doonaa, oo dhisi doono Church of Ciise Masiix, waxay ku beddelma doonaa dareento degdeg ah u noqon doonaa jirka ah ee iftiinka. Waxay la saari doonaa samada iyo si toos ah uga nolosha dunida heli doonaa nolosha weligeed ah oo aan dhimasho.
Kuwa dhintay oo la afduubay haddii ay ahaayeen nool. la Soo Bixin ee jirka ka mid ah, iftiinka iyo sidoo kale laga saari doonaa jannada ku leh kuwa la badbaadiyey ka nool.
Si wada jir ah ay dhigtaan, arooskii Wanku ku noqon doonaa axdi weligiis ah ka dhigi doonaa in Ciise Masiix la kaniisaddiisa sameeyay.
Haddii Ilaah waxa uu isku dayayaa in ay na soo toosin si walba waa in intooda badan la badbaadin karaa iyo in sidoo kale qayb ka mid ah Church of Ciise Masiix in laga saari doonaa laga yaabaa in.
Ciise Masiix oo Ilaah jecel ninka!
Laakiin ninkii la hadduu doonayo inuu ku qaataan nolosha weligeed ah?
Ha u malaynina muddo hal daqiiqad in times dhamaadka waa macno darro, xujooyin ah waa tiro badan yihiin, dhammaadka wakhtiga dhab ordaya oo waxba joojin doonaa.
Ciise Masiix yahay albaabka iyo haatan waa wakhtigii rajadii si ay u badbaadaan, inay ka toobad dembiyadeenna, waxay kasbanayeen our, khaladaadkii aan galnay, khaladaadkii aan galnay iyo fikradaha naga Caa’isha.
HORUMARKA calaamadaha NOQOSHADDA Ciise Masiix
In view of horumarka ah calaamadaha aan runtii mareynaa kulamadii ugu danbeeyay ka hor soo laabashada Ciise Masiix.
Waxaan sharaxay in aan article SEDDEXDA CALAAMADAHA DAMBE EE laabashada Ciise Masiix dunida! Waxaa jiray saddex calaamadaha ka hor soo laabashada Ciise Masiix.
01) Waxaana soo bandhigistaan ​​ay oo ka mid ah La-dagaallanka Masiix
02) dib u dhiska saddexaad ee macbudka Yeruusaalem
03) khilaafka A caalamiga ah waa la isku raacay by Ciise Masiix ee uu ka soo laabtay
Waayo, calaamada hore « anti-Masiix » waa in aan fahamsanahay in ay jiraan heerar dhawr.
First gudaha kaniisadda, ka gees ah ayaa waxaa la aasaasay of boqorradii oo dhammuna waxay popes oo isku xigta tan iyo heshiisyadii Lateran.
baadari ugu danbeysay « François » personalizes geesta this in ku hoos gambanaya arimo Wanka waa yeey, jidkuna waa Masiixiyiinta ah kuwaas oo si toos ah u raacaan cadaabta. Bal eeg article: STATEMENT rasmiga ah ee dhimashada kaniisadda kaatooligga ah
Sida laga soo xigtay Malachi ee wax sii sheegidda ee popes ah, Pope Francis waa baadari ee la soo dhaafay. Ku alla kii waxaa loo magacaabay in wax sii sheegidda « Peter Roman ah », taas oo keentay kaniisadda inta lagu guda jiro fitnada hor socdaa baabba ‘ee Rome iyo soo laabashada Ciise Masiix.
baabba ‘The of Rome macnaheedu ma aha burburinta magaalada Rome by dhulgariir weyn, laakiin burburkii Europe sida Rome cusub « boqorkii siddeedaad Cutubka XII ee buugga apocalypse. » oo sidaas daraaddeed nidaamka ka gees ah.
Waxaan ka ogahay xagga kitaabkii apocalypse iyo nebiga Daniel, dhibaatadii weynayd ee la soo dhaafay 42 bilood.
Sidaas sida Pope Francis ayaa la doortay, March 13, 2013 waa in aan laga yaabaa arki laabashada Masiixa si Earth ee September ama October 2016, ay u badan tahay inta lagu jiro iidda turumbooyin.
Bal eeg article: END OF THE toddobaadkii ugu dambeeyey ee Daniel END END 2015 OR 2016
The anti-Masiix sidoo kale waa nooc ka mid ah midnimadu jinka laba xayawaan oo ahaa nebi been ah oo danta laga leeyahayna waa in la silciyo Masiixiyiinta ah iyo iyaga oo si toos ah hanuuniyo Jidka Jahannamo.
Waxaan si fudud u fahmi karaa in Popes dhawaan yihiin bahalka ku tilmaamay in kitaabka Cutubka apocalypse 17.
By ka dhan ah qaar ka mid ah arki Pope Francis nebi been. Shaqsi ahaan waxaan aaminsanahay in Pope Francis waa mid ka mid ah laba xayawaanka badda, dugaagga dhulka isagoo hore ee Pope Benedict XVI in badan hore ee Pope weli waa nool yahay. Oo weliba nebigii beenta ahaa waan garanayaa oo kaliya mid ka mid ah, kuwaas oo dadka taabacsan silciyo Masiixiyiinta ah.
Waa in la yidhaahdo « Mohammed » kuwaas oo in kastoo ay ku dhintay 632 dhashay diin been ah u adeega Islaamka iyo jihaadiyiinta.
Tani waa dib u dhiska rabitaan dhab ah oo ka mid ah dadka Yuhuudda ah, laakiin Ilaah marnaba u ogolaan doono dib u dhiska macbudka u dhow masaajidka « al-Aqsa » diinta beenta nebigii beenta ahaa.
macbudka cusub uu noqon doono macbudka Ciise Masiix dagta samada ka « Yeruusaalem oo jannada »
Tani waa stretch kaliya oo final ka hor soo laabashada Ciise Masiix.
Waxaa cad in dagaalkan waxaa bilowday tan iyo 2012. Waxaan u aragnaa iskeelka of khilaafka this taas oo hore u caalimiga iyo guulaha xoog iyo qaaddo maalin kasta.
Waa khilaafka waxan la socday inay qaataan Ciise Masiix ee uu ka soo laabtay.
Waxaan nahay ee February iyo waxa ku dhawaaqay in warbaahinta waa ka fog tahay kalsooni. Turkey iyo Saudi Arabia doonayaan in ay dagaal tagaan Suuriya. The Ruushka iyo Iran oo ka soo horjeeda yabooho kuwaas dhinacyada cusub sanduuq laabto haddii ay yimaadaan si ay Suuriya.
Shiinaha ay anshaxa ee dagaalka ka dhanka ah Maraykanka iyo xulufadiisu ay ku Africa iyo Suuriya duurka dhaqaale. Wixii ay faragelin military ee Bariga xoog ah, waa kaliya wax ku xiran waqtiga la istiraatiijiyadda militeri. Sida iska cad Shiinaha fara doonaa oo lagu taageerayo ciidamada Ruush.
Waxa ay ahayd oo ku yaal bannaanka Megiddoo in Israa’iil in Ciise Masiix sida uu Kitaabka Quduuska ah waa in ay joojiyaan dagaalka this .
Sidaas marka buuxdhaafeen dagaallada haatan ka mid ah Suuriya iyo Israa’iil la weeraray doonaa. Markaas waxaa jiri doona dhawaaqaya iyo ilmo laakiin waxa ay noqon doontaa mid aad u soo daahay inuu Ciise Masiix oo aanay u badbaadin. Sababtoo ah tani waxay noqon doontaa natiijada times dhamaadka in la oofin doono la soo laabashada Ciise Masiix.
Oo waxaa suurto gal ah in ay tahay in falanqaynta ah calaamadahaas, waayo, bisha September ama October, 2016.
Sannadkan 2016, waxaan ognahay in ay noqon doonto ka xun 2015. Oo haddii aan Masiixa la socda ee sannadkan 2016-ka, waxaan filaynaa waa wax cabsi badan. Sida dhaqaale burbur ah, laakiin sidoo kale in ay masiibooyinka tirada badan.
Weligay naftayda ku filan ku celi, waxaan nabi ah ma ihi , oo aan hore u joogta ah khiyaameeyay beegsaday muddo gaaban loogu talagalay soo celinta ah oo Rabbigeenna Ciise Masiix. By khasaaraha waxaan qalad ah oo ku saabsan ma ihi xaalad xumeyd ee calaamadaha sannad ilaa sannad .
Sida aan wax badan qaldo ku saabsan dhawaaqay ee soo laabashada Ciise Masiix ahay, Waxaan doonayaa in aan noqon more taxadir iyo aadan ogow, in Ciise Masiix u iman doontaa sida tuug oo kale, oo sidaas daraaddeed ninna waxba kama oga goorta uu noqon doono inuu soo laabto.
Sidoo kale waxaan sugi uu ka soo laabtay sanadkaan in bisha September ama October sida ay falanqaynta calaamadaha aan, laakiinse anigu waa inaan idinku leeyahay, Masiixu weeraryahanka iman karo, oo waxay qaadan isaga oo kaniisad mar walba ka hor inta uu ka soo laabtay.
sidoo kale waa inaan sheegaa in this soo laabtay noqon kartaa ka dib iyo fara-2017 ama 2018 kaas oo sidoo kale ay jiraan calaamado aan kuu sharxi doona marka uu wakhtigu yimaado.
Sidaas hubiyo, tukado iyo rajeynayaa laabashada dhow Ciise Masiix, maxaa yeelay, waxay si degdeg ah u soo noqon doonaa oo xanuun yar uu noqon doono dhalaalaya aadanaha.
Tani sanadkii 2016 inkastoo ay adag tahay dadka in ay noo Nasaarada sanad rajo, toobadda iyo salaadda in Ciise Masiix ku hayaa noo diiwaan gashan in kitaabka nolosha weligeed ah.
Toobad keena iyo dad badan oo u yimid inuu Masiix, haddii aadan rabin in ay ku qaataan daa’in Jahannamo.
Waqtiga qoraal this kasta weli la badbaadin karaa. Ilaah waa idin siiyey doonista xorta ah iyo tani waa markii ugu in ay qaataan waddada saxda ah.
Kaalay in Ciise Masiix adoo waydiinaya baabtiis biyo wadaadka ah, wadaad ah ama Christian a ka dibna mar kale iyo mar kale ku baryayaaye, si aad u hesho ilaalinta Ruuxa Quduuska ah ee Ilaah si ay kuu caawiyaan, in aad loo ilaaliyo oo hanuunin tallaabooyinka aad in qarada weyn ee jeer dhamaadka gudcurka.
Love, Nabadda iyo farxadaha in quluubta iyo guryaha la eegaayo in ka kaxayntu ay of Church ee qaar ka mid ah iyo soo celinta on Buur Saytuun Yeruusaalem Rabbigeenna iyo King Ciise Masiix, ina Ilaah oo keliya oo waayo, boqortooyadiisa ka mid ah King of Kings of dhulka intii kun sannadood ah kala Qiyaamaha aadanaha.
Waxaan idiin ku yeedhi xagga akhri articles aan:
HADDII CIISE MASIIX gaabiyaa IMAN, kiniisadda baaba’aan muddo ka yar hal qarni!
END OF todobaadkii hore Daniel END END 2015 OR 2016
Sida time waa in Salaadda, waxaan idiin ku yeedhi inuu ku tukado,
Salaadda Our Aabbaha ah iyo Nabad Mary